Korra TBOM hala Oromoo fi Oromiyaa irratti mari’ate magaala Nurenberg gegeefame milkiin xumurame
Korri TBOJ/TBOM guyyaa 22.03.2014 magaalaa Nurenberg sa’a 12:00-17:00 tti sirna ho’aa dhaan geggeefame. Korra kana irratti miseensonni TBOM baayyinan qooda fudhataniiru. Korri kun TBOJ fi TBOM kan qophaa’e yoo ta’u. Ittii aansuunis bakka bu’oota amantaa Kristiyaanaa, Isilaamaa fi Waaqeffataa kan ta’an Jaal Etafa Legese, J/ Fuad Aman Adam fi J/Makonin Gurmeesaa kora guyyaa kanaa akka Aadaa Oromootti eebban walga’ii bananiiru.
KHG TBOJ kan ta’an Dura teesu aadde Bontu, itti anaa dura ta’aa obboo Umar Abdulsalaam fi barreessaa obboo Fallaqaa Baahiru waltajji walhaarkaa fudhudhan hala siyaasa Oromoofi jaarmiyaalee (dhabbilee) fi namoota Qabso Bilisummaa Oromoof QBO gummaacha gudaa keenaa jiran gargaarsa gochuu dandadhamu irratii maridhataniru.
Kan mariin irrati gegeefamee keessaa isaan ijoo :-
1. Kabajaa wagaaa 50ffaa Waldaa walgargaarsa Macaafi Tulama WMT
2. Hidhamtoota Oromoo mana hidha wayyaanee keessati darara argaa jiran matiin isaani rakkoora jiran gargaaru fi hamleedhan bira dhabbachu
3. Oromia Media Network (OMN) hala dhabbataafi wal-irraa hincineen bira dhabbachufi maallaqaan gargaaru danda’amuu irratii bal’inaan miseensoota faana mariidhataniru, hala raawwii isaas murteefataniru.
Ittiansudhaan gaaffii fi yaada miseensoota irraa dhihaate irratti marii ballinaan geggeffamera.